हेर्नुहोस आजको राशिफल : कुन राशिका लागि आजको दिन शुभ ? | सुदुरपश्चिम खबर
वैवाहिक जीवन सुमधुर बनाउन आवश्यक यस्ता १० टिप्स
घरमा सधैं सुख समृद्धि रहोस् अनि धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
वि.सं. २०७७ साल पौष २९ गते । बुधबार । इस्वी सन् २०२१ जनवरी १३ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्री शाके १९४२ । पौष कृष्ण पक्ष । तिथि–औँशी, ०८ घडी ४१ पला, बिहान १० बजेर २६ मिनेट उप्रान्त प्रतिपदा । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर ५७ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर २७ मिनेटमा । दिनमान २६ घडी १४ पला ।
मेष : साङ्गितिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुने छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । नीति निर्माण तहमा तपार्ईँको सहभागिताले महत्त्व पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो सफलता हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा पदोन्नतिको गतिलो योग रहेको छ ।
बृष : समुदायको हक हितको निम्ति काम गर्ने अवसर आए पनि असजिला परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने छ । पढाइलेखाइमा ध्यान नजाँदा सफलता हात पार्न मुस्किल रहेको छ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरे पनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा मन दु:खी हुनेछ । माया प्रे’ममा अविश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथीसँग सामान्य मन मु’टाव सिर्जना हुनेछ । धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको भए पनि बाटामा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ ।
मिथुन : बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापार व्यावासायबाट मनग्य आम्दानी हुने छ । रमाइलो पारिवारिक यात्राको तय गर्न सकिने छ भने यात्रासँग सम्वन्धीत कार्यहरु हुने छन् । अध्ययनमा भनेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ भने खोज मूलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले आर्थिक अवस्था कमजोर रहने हुनाले घर परिवारका आवश्यकताहरू पूरा गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
कर्कट : प्रे’म तथा मित्रताको वन्धन कसिलो हुनेछ भने दा’म्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । विभिन्न भौतिक वस्तु तथा विलाशी सामानको प्रयोगमार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले अग्र स्थानमा तपार्ईंको नाम आउनेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिनेछ भने लामो दूरीको व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
सिंह : बिहानको समय मध्ययम रहेकोले सवारी साधन तथा अन्य वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा घट्नाहरु घ’ट्न सक्छ । प्रेममा एक अर्कालाई अविश्वास गर्दा मन मु’टाव बढ्नेछ। मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले राजनीति गर्नेहरुले सहकर्मीहरुलाई किनारा लगाउँदै पदप्रतिष्ठा पाउनेछन् । व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ भने आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने योग रहेको छ ।
कन्या : बौद्धिक कार्यमा सहभागी भई आफ्नो गतिलो प्रस्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ तर भने जस्तो पारिश्रमिक पाइने छैन । विद्यामा सफलता पाउन निकै नै स’ङ्घर्ष गर्नुपर्ला । परिवार तथा सन्तान बाट तपार्ईंले गरेको काममा असहयोग हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी नबढाउँदा राम्रो हुनेछ । माया प्रे’ममा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ । पेट सम्बन्धी स’मस्याले सताउनेछ हुँदा मानसिक त’नाव बढ्नेछ ।
तुला : बिहानको समय राम्रो रहेकोले छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने परा’क्रम बढेर जाने हुनाले सहसिलो काम गर्ने आँट आउने छ । माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्ययम रहेकोले खानपान तथा मसमको ख्याल गर्नुहोला छाती तथा श्वास प्रश्वास स’म्बन्धी सम’स्या आउन सक्छ ।
बृश्चिक : दाजुभाइ तथा छिमेकीबाट सहयोग तथा उपाहार प्राप्तिको योग रहेको छ । आफन्त तथा मन पर्ने साथीका साथ छोटो, रमाइलो तथा अर्थपूर्ण यात्रा हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । न्या’यिक निर्णयहरु तपार्ईंकै पक्षमा हुनेछ भने शत्रु परास्त हुनेछन् । खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न प्रशस्त समय खर्चनुपर्नेछ । बिहानको समयमा भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
धनु : बिहानको समय राम्रो रहेकोले समयमा कामहरु सम्पन्न हुने तथा अरुको काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिने छ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिने छ । मध्यान्ह बाट समय मध्ययम रहेकोले नराम्रा तथा अप्रिय समाचारमा मन खिन्न हुनेछ । वचन पूरा गर्न नसक्दा आफन्त तथा इष्टमित्रहरु तपार्ईंदेखि टाढिन सक्छन् ध्यान दिनुहोला ।
मकर : आफूसँग भएका स्रोत साधनहरुलाई सही रुपमा परिचालन गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ । पुराना लगानीबाट भने जस्तो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा मन जाने हुनाले राम्रो अङ्क ल्याई सफलता हात पार्न सकिनेछ । कुनै पनि विषयमा समयमा निर्णय लिन सक्दा मानसम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ । प्रेममा आत्मीयताको भाव झल्कनेछ भने साथीभाइसँगै रहेर मीठो खाना खाने तथा रमाइले गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ : बिहानको समय राम्रो रहेकोले मायाप्रेमको बन्धन कसिलो हुनुको साथै दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी हुने छ । खनिज पदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जस्तै धातु तथा पानीसँग स’म्बन्धित वस्तुहरुको कारोबारबाट फइदा हुनेछ । दाजुभाइ तथा आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । मध्यान्हबाट लामो दूरीको यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि समय फलदायी रहनेछ ।
मीन : आफन्तजन तथा दाजुभाइबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ। माया प्रे’ममा सामीप्यता बढेर जानेछ भने परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ। व्यापार व्यावसायबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिनेछ। भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेको छ । विद्यामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउँदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । तपाईंको दिन शुभ रहोस
माघ ५ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस् ! तपाईंको दिन शुभ रहोस !!
माघ ४ गते आईतवारको राशिफल हेर्नुहोस् ! तपाईंको दिन शुभ रहोस् !!
एक नेपाली सेफको हत्या लण्डनमा
अब लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा ६० नम्बर ल्याए पास
आज देखि श्री स्वस्थानी व्रत एवं माघस्नान शुरु !!
केपी ओलीले भने : मेरो बुबा नै भर्खर बुढोबुढो हुनुभएको छ !
दुबै पक्षको सहमति नभए फ्रिज हुन सक्छ नेकपाको सूर्य चिह्न !